Ejipta: “Tena mampalahelo ahy tokoa i Mobarak” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Avrily 2011 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, Español, عربي, 繁體中文, 简体中文, polski, বাংলা, Ελληνικά, English
Anisan'ireo lahatsoratra manokana momna ny fanoherana tany Ejipta 2011 ity .
Hatramin'ny nivoahan'ny vaovao tamin'ny herinandro lasa fa ny filoha teo aloha Hosni Mubarak sy ny zanany roalahy Alaa sy Gamal El-Din no nosamborina sy ampiakarina fitsarana, ilay blaogera sady mpitolona Hany George, nilaza fa niresaka tamin'ny olona maro izy ka malahelo ny mahazo an'i Mubarak ry zareo noho ny fahanterany sy ny fanatanterahana izany fitsarana izany.
Anisan'ireo mpitolona teny amin'ny kianja Tharir i Hany nandritra ny tolom-panavaozana tany Ejipta. Tao amin'ny facebook tamin'ny 16 aprily 2011, nizara tantara marina [ar] izy izay niseho teny amin'ny kianja Tharir, ary nosoratany ho an'ireo izay mbola malahelo an'i Mubarak izany tantara izany.
Indro ny dikanteny avy amin'ny teny arabo:
Tamin'ny 30 janoary, nahita lahiantitra iray aho. Marary no fijery azy, mandeha irery ao anatin'ny mpitolona teny amin'ny kianja Tharir. Miaraka amin'ny kentrona eny amin'ny endriny, nijery ny vahoaka teny izy. Tsy nitsiky, tsy nipi-maso mihitsy izy. Nandinika ireto olona fotsiny no nataony, ohatry ny mitady olona. Andro vitsy taty aoriana rehefa tsy nahita azy teny amin'ny kianja intsony aho teo amin'ilay toerana nahitako azy, dia nanontany tena aho hoe ahoana no fomba fiainanan'iny lahiantitra iny? Iza no mikarakara azy? Narahako maso mantsy izy nandritra ny fotoana maharitra, ary tsy nahita olona niaraka taminy mihitsy aho.
Taorian'ny niresahako taminy, no nahafantarako fa maty niaraka tamin'ireo mpitolona hafa ny zanany lahy tokana. Io zanany io no mba hany tokana nikarakara azy amin'izao fahanterany izao. Ary izay no antony tsy nahitana azy intsony teny amin'ny kianja Tharir.
Ao anivon'ny fihetsiketsehana, lehilahy maro tonga mitaingina rameva, mikapoka ireo mpanao fihetsiketsehana teny amin'ny kianja Tharir. Sary nozarain'i AmalShawki tamin'ny 02 febroary 2011.
﻿﻿﻿﻿قال لي، قتلوا ابني و انا كمان عايز اموت، بس اموت شهيد زيه علشان عايز اشوفه .في اليوم التالي لمعركة الجمل الشهيرة ذهبت الي المكان الذي نصب فيه العجوز خيمته لأسأل عنه فلم اجده، وجدت في خيمته مجموعة من الشباب، سألتهم عنه فلم يعرفوه، قالوا لي انهم اتوا من مدينة المنصورة بالامس و شاركوا بمعركة الجمل، و وجدوا في الصباح هذه الخيمة بلا صاحب، و ظلوا بجانبها فترة طويلة حتي تأكدوا من خلوها، فسكنوها .
Hoy izy tamiko: “Novonoiny ny zanako, ka te ho faty koa aho, ho lasa maritiora tahaka azy. te hahita azy tsy ho ela aho.”
Andro iray taorian'ny “ady teny ambony rameva”, nandeha nankeny amin'ny toerana nametrahany ny trano lainy aho hijery azy, kanefa tsy tao izy. Andiana mpanao fihetsiketsehana no hitako tao. rehefa nanontaniako ry zareo dia nilaza fa avy any Mansoura ary nandray anjara tamin'ny “ady teny ambony rameva”. Hitan-dry zareo fa tsy nisy olona tao anatin'ilay trano lay. Nandrasany fotoana elaela vao azony antoka fa tsy misy tompony ilay izy, ka niditra tao ry zareo.
Nosoratako ho an'izay rehetra tia an'i Mubarak ity tantara ity, ireo izay milaza fa antitra izy miaraka amin'ny zavatra nataony ka tsy tokony hiditra am-ponja. Ity tantara ity dia natao ho an'izay rehetra tsy mahazo fa ny fahamarinana dia manana ny lanjany goavana, tena mitovy amin'ny famindram-po – raha tsy mbola ambony aza, raha ny momba ny filoha teo aloha no jerena. Raha tena manana famindram-po tokoa ianareo, mivavaha ho an'ny fanahin'ilay lahiantitra sy ny zanany maty maritiora.